JAWAAB HADAL KA SOO YEEDHAY GUDDOOMIYEY KU XIGEENKAYour Everyday News
JAWAAB HADAL KA SOO YEEDHAY GUDDOOMIYEY KU XIGEENKA
Waxan dhegeystey hadalo kasaa-kasaa iyo kibir ka muuqdo oon loo meel deyin oo uu goob fagaara ah isla soo mutuxay Md Axmed Sheikh Cali Ayaanle- waa Guddoomiyaha Koowaad ee Golaha Wakiilada JSl. Markasta oo Doorasho soo dhowaato ayaa waxa inan dhego barjaysa “Saami Qeybsiga Kuraasta Golaha Wakiilada.” Dunida waxa waxa lagu Qeybsada waa tiro koobta rasmiga ah ee dadka. Qaab beeleed iyo 4.5 tabliiqiga Axmed Ismaaciil Samater iyo Cali Khaliif da’yarta kula dhexwareegayaan waxba laguma qeybsado.
Ciddii saami qeybsiga samayn lahayd waa adiga iyo 81 kale ee shan iyo toban sannadood ummadda soo hor kambadhuudha. Sidii lagu heshiiyey Doorashadi Deegaanka ee Bish December, 2002-Hal Qof- iyo Hal Cod iyo tiro Rasmi ah! Gobolka aad ka soo jeedo iyo guud ahaan qarankaba cisaabadka aad horjooga ka tahay aya gabay oo wax ma tarayaal iyo mooshin quutayaal noqday.
Tusaale Sida Dunidu wax u qeybsato:
Tirada Xubnaha Aqalka Hoose: 650 Xubnood
oo lookala Qeybsada sida soocota:
Gobolka “Scotland”== 59 Xubnood
Gobolka W/Ireland== 18 xubnood
Gobolka “Wales” == 40 xubnood
Gobolka “England” == 533
Sidaas waxay ku noqotay waa tiro koo, waana afartaa Gobol. Siyaado doonow indhaha iyo dhegaha furo.
Cidina cid kuma xad-gudbikarto oo xaqeeda ma duudsiyi karto. Bilowgii Somaliland markay xiix, xuux, iyo hoos u gurxanku dhamman waayey, waxa markhaati ma doon ah iyo laba kursi oon laha Gobolka Saaxil Laga soo jaray ayaa midna Awdal la siiyey, midna Sanaag Bari. Ayaanlow Reer Sanaag Bari kursigii la siiy si la yaableh ayey ka yeeleen. Adiga ayaan kuu dhaafayaaye saxiibadaad Reer Las Qorey bal ka wareyso.
Gobolada dalka waa la wada degaa. Suaal ina Cali Ayaanlow kuraasta aad hadda Gobolkaagu heysto dadka aad ka tirada badantahay intee ayey saami u heleen marka degmo-degmo loo sii qeybiyo? Taydaa keli lihi taada kula lihi dunida kama shaqayso. Wixii Gobolku helo anna isku koobaaya halkee lagaga dhaqma? Maroodi-Jeex nin inaadeerkaa ah ayaa ka soo baxay. Cidi kama hadal oo lama odhan Gobol kale ayuu ka soo jeeda. Doorashadii Deegaanka ee 2012 Gailey waxa kasoo baxay dad laga tiro badan yahay, cidina hoose ugumay fiirsan. Taana Ilaahay iyo Isaaq uunbaa laga helaaye ha u deymo la’aan.
Somaliland oon halaqii Afweyne shan farood iyo calaacal kaga dhaqaajay ayaan ku idhi kaama lihi ila wadaag. Ilaahay ka seko taa Isaaq uunbaa laga helaa. Dad iyo duunyaba Isaaq wuu ku shuf beelay waanu u badheedhay. Markaanu ciidamadii Afweyne arladan ku hirdamaynay halkeed ku uumanayd? Ma asxaabul-kahaf- wal raqiim- baad ahayd?
Kun iyo kow jeer haddii la tiro koobo, Ina Cali Ayaanlow ku Abshir kuraasta aad maanta haysto inka yar in aad helaysid. Marnaba hal kursi oo siyaada ha u fadhin.
Awood dhaqaale iyo tiro ayaad sheegtay intaba soo bandhig, waxaynu barbar dhigi dadka reer Awdal asal ahaan ka soo jeeda ee Shaqaale Dowladeed ah askar ha noqoto ama shaqaale kale. Waa madax ka kow? Haddii Gobolkaagu daalac yeesho waa laguu celin; haddii Gobolka siyaado la socoto waa soo celiye sidaa ula soco.
SAMI-QAYBSIGA: G/Wakiilada Ha Lagu Sargooyo Tirada Codbixiye-yaasha – G/Guurtida 6da Gobol Tiro Siman Ha La Siiyo – Sida Maraykan.